Cayilka Joojinta sigaarka Bidaarta Fitamiinada HIV Test Fitamiin D Test FOBT Test DNA Test Medicine For Somalia Propecia 1mg (Finasteride) Propecia waxaa la qaataa hal kaniini maalintiiba waxaana loogu tala galay bidaarta raga haddii ay noqon lahayd mida fooda leefta iyo mida mida dhalada dhexe.	Gado	Cudurrada & Dawooyinka
Bidaarta Caadi ahaan qofka weyn waxaa madaxiisa ku yaalla ilaa iyo 100,000 oo tin dadka badankiisana waxaa ka dhaca inta u dhaxeysa 40 ilaa iyo 120 timood maalin walba. Arintani waa qeyb ka mid ah caafimaadka caadiga ah ee dhicida iyo dib u soo bixidaba. Balse haddii shaladaadu ay in ka badan intaas soo goyneyso, amaba aad dareemeysid in foodaadii ay dib u noqoneyso waxaa ay u badan tahay in aad markaa qabtid bidaarta la iska dhaxlo waxaana loo yaqaanaa androgenetic alopecia. Waxaa kaloo sababi kara arin caafimaad daro la xiriirta, saameyn daawo aad qaadatid, nafaqo darro, timaha oo aadan si fiican u daryeelin iyo weliba wel-wel iyo walaac ku haya.
Fadlan riix halkan haddii aad u baahan talo dhakhtar haddii kale hoos ka dalbo daawada bidaarta
Ka dalbo hoos daawo tayadeedu sareyso hadba intaad doonaysid, Propecia 1mg (Finasteride) In ku filan 1 bil
Propecia 1mg (Finasteride) In ku filan 2 bilood
Propecia 1mg (Finasteride) In ku filan 3 bilood
Propecia 1mg (Finasteride) In ku filan 6 bilood
Propecia 1mg (Finasteride) Propecia waxaa la qaataa hal kaniini maalintiiba waxaana loogu tala galay bidaarta raga haddii ay noqon lahayd mida fooda leefta iyo mida mida dhalada dhexe.